အိပျတဲ့အခါ သှားရညျကခြွငျးကို ဟနျ့တားနိုငျမယျ့နညျးလမျး (၈) ခကျြ
HomeKnowledgeအိပျတဲ့အခါ သှားရညျကခြွငျးကို ဟနျ့တားနိုငျမယျ့နညျးလမျး (၈) ခကျြ
လူအမြားစုက အိပျတဲ့ အခါမှာ သှားရညျ ကတြတျကွ ပါတယျ၊ သှားရညျ ကခြွငျးက ခန်ဓာကိုယျထဲက ရောဂါတဈခုခု ဖှံ့ဖွိုးလာတဲ့ လက်ခဏာ တရပျဖွဈသလို ခန်ဓာကိုယျ ထဲမှာ တခုခု ခြှတျယှငျးနလေို့ လညျး ဖွဈပါတယျ။ ဘာ့ကွောငျ့ သှားရညျ ကရြတာလဲ။
အိပျတဲ့အခါ မကျြနှာကွှကျသားတှကေ အနားရသှားပါတယျ။ တံတှေးတှကေ အိပျနတေဲ့အခါမှာ ပါးစပျမှာ စုလာပါတယျ။ပွီးတော့ အနားရနတေဲ့ မကျြနှာကွှကျသားတှကေ ပါးစပျကို အနညျးငယျဟသှားစပွေီး တံတှေးတှေ ကလြာစေ ပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ အိပျရာထပွီဆိုရငျ သှားရညျတှကွေောငျ့ ခေါငျးအုံးမှာ စိုနတေတျပါတယျ။
သှားရညျ အလှနျကခြွငျးက အာရုံကွော ရောဂါတှနေဲ့ သကျဆိုငျသလို နှာခေါငျးပိတျခွငျးရဲ့ရလဒျကွောငျ့လညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ လဖွေတျထားတဲ့ လူတှကေ ပိုပွီး သှားရကေတြတျ ကွပါတယျ။
1. နှာခေါငျးကို သနျ့ရှငျးရေးလုပျပါ။
သှားရညျကခြွငျးရဲ့ အဓိက အကွောငျးရငျးတှေ ထဲက တဈခုကတော့ နှာခေါငျးပိတျလို့ပါ။ နှာခေါငျးပိတျခွငျးကွောငျ့ ပါးစပျနဲ့ အသကျရှူရပွီး သှားရညျကတြတျ ပါတယျ။အဲဒါကွောငျ့ ညတိုငျး မအိပျခငျမှာ နှာခေါငျးကို သနျ့ရှငျးရေး လုပျပေးသငျ့ ပါတယျ။
- ညပိုငျးမှာ ရနှေေးနဲ့ရခြေိုးခွငျးက နှာခေါငျးကို သနျ့ရှငျးစပွေီး အသကျရှူရတာကို ကောငျးစပေါတယျ။
- ယူကလဈလို ရနံ့ဆီကို ရှုပေးတဲ့အခါ အသကျရှူရ ပိုကောငျးလာပွီး ပိုပွီးအိပျပြျောပါတယျ။
- နှာခေါငျးသနျ့ရှငျးရေး လုပျတဲ့ Vick's Vaporub လို ဆေးမြိုးကလညျး နှာခေါငျးထဲမှာ ပိတျနတေဲ့အရာတှကေို သနျ့ရှငျးစမှောပါ။
ပကျလကျလှနျ အိပျခွငျးက ပါးစပျထဲက တံတှေးတှကေို အပွငျ မထှကျကြ လာစတေော့ ပါဘူး။ စောငျးအိပျခွငျး၊ မှောကျအိပျခွငျးက ပါးစပျထဲက တံတှေးတှကေ စုမိလာပွီး ခေါငျးအုံးပျေါကလြာမှာပါ။
3. ညအိပျတဲ့အခါ ဟောကျတတျတဲ့ သူတှေ ကလညျး သှားရညျကတြတျ ပါတယျ။
အသကျရှူရတာ အဆငျမပွတေဲ့သူတှကေ ဟောကျတတျကွ ပါတယျ။ ဟောကျခွငျးက အိပျခွငျးကို အနှောငျ့အယှကျ ဖွဈစပွေီး ညဘကျမှာ လနျ့နိုးစတေတျ ပါတယျ။ မနကျနိုးတဲ့ အခါ ပငျပနျးသလို၊ မူးသလိုလညျး ခံစားရတတျ ပါတယျ။ ဟောကျတတျတဲ့ သူတှကေလညျး သှားရညျကကြွ ပါတယျ။ ဆေးလိပျသောကျတဲ့ သူတှေ ကလညျး အသကျရှူခွငျးနဲ့ ပတျသကျလို့ ပွဿနာ ရှိနိုငျပါတယျ။
4. ကိုယျအလေးခြိနျ လြှော့ပါ။
ကိုယျအလေးခြိနျ မြားခွငျးကလညျး အိပျစကျမှုမှာ သကျရောကျမှု ရှိပါတယျ။ ကိုယျအလေးခြိနျ မြားခွငျးကွောငျ့ အိပျတဲ့အခါမှာ ဟောကျပွီး သှားရညျကတြတျကွ ပါတယျ။
5. အထူးပွုလုပျထားတဲ့ ပစ်စညျး ကိရိယာတှကေို သုံးပါ။
သှားရညျကခြွငျးကို ဆရာဝနျနဲ့တိုငျပငျနဲ့ အခါ ဆရာဝနျက ပစ်စညျးကိရိယာတှကေို လမျးညှနျပေးပါတယျ။ အဲဒီလို ပစ်စညျး ကိရိယာလေးတှကေ အိပျရေးဝဝ အိပျနိုငျအောငျလညျး ကူညီပေးမှာပါ။
6. သောကျနကေဆြေးတှကွေောငျ့လညျး သှားရညျကတြတျပါတယျ။
တခြို့ ပဋိဇီဝဆေးတှကေ တံတှေးတှကျေကို အလှနျအကြှံထှကျအောငျ လုပျပေးပွီး သှားရညျကစြပေါတယျ။
7. ခေါငျးကို တညျ့တညျ့ထားပွီး အိပျပါ။
ခေါငျးအုံးအမွငျ့နဲ့ အိပျတဲ့ အခါ သှားရညျကတြာ နညျးသှားပါတယျ။
8. သှားရညျကတြာ မြားတဲ့ အခါ ခှဲစိတျမှု ခံယူရတတျ ပါတယျ။
တဈခါတလမှော ဆရာဝနျအခြို့က ခှဲစိတျပွီး ဂလငျးတှဖေယျရှားပဈဖို့ အကွံပေး ပါလိမျ့မယျ။ အာရုံကွောနဲ့ပတျသကျပွီး ပွဿနာတှေ ရှိတဲ့အခါ တံတှေးအလှနျ ထှကျပါတယျ။ အလှနျအကြှံဖွဈလာတဲ့အခါ ခှဲစိတျရတတျ ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သှားရညျကတြာကို မခှဲစိတျဘဲနဲ့ ပြောကျကငျးအောငျ လုပျလို့ရမယျ့ နညျးလမျးကို ဆရာဝနျတှကေ အရငျဆုံး အကွံပွုတတျကွ ပါတယျ။
အိပ်တဲ့အခါ သွားရည်ကျခြင်းကို ဟန့်တားနိုင်မယ့်နည်းလမ်း (၈) ချက်
လူအများစုက အိပ်တဲ့ အခါမှာ သွားရည် ကျတတ်ကြ ပါတယ်၊ သွားရည် ကျခြင်းက ခန္ဓာကိုယ် ထဲက ရောဂါတစ်ခုခု ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့ လက္ခဏာ တရပ်ဖြစ်သလို ခန္ဓာကိုယ် ထဲမှာ တခုခု ချွတ်ယွင်းနေလို့ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့် သွားရည် ကျရတာလဲ။
အိပ်တဲ့အခါ မျက်နှာကြွက်သားတွေက အနားရသွားပါတယ်။ တံတွေးတွေက အိပ်နေတဲ့အခါမှာ ပါးစပ်မှာ စုလာပါတယ်။ပြီးတော့ အနားရနေတဲ့ မျက်နှာကြွက်သားတွေက ပါးစပ်ကို အနည်းငယ်ဟသွားစေပြီး တံတွေးတွေ ကျလာစေ ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အိပ်ရာထပြီဆိုရင် သွားရည်တွေကြောင့် ခေါင်းအုံးမှာ စိုနေတတ်ပါတယ်။
သွားရည် အလွန်ကျခြင်းက အာရုံကြော ရောဂါတွေနဲ့ သက်ဆိုင်သလို နှာခေါင်းပိတ်ခြင်းရဲ့ရလဒ်ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လေဖြတ်ထားတဲ့ လူတွေက ပိုပြီး သွားရေကျတတ် ကြပါတယ်။
1. နှာခေါင်းကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။
သွားရည်ကျခြင်းရဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းတွေ ထဲက တစ်ခုကတော့ နှာခေါင်းပိတ်လို့ပါ။ နှာခေါင်းပိတ်ခြင်းကြောင့် ပါးစပ်နဲ့ အသက်ရှူရပြီး သွားရည်ကျတတ် ပါတယ်။အဲဒါကြောင့် ညတိုင်း မအိပ်ခင်မှာ နှာခေါင်းကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးသင့် ပါတယ်။
- ညပိုင်းမှာ ရေနွေးနဲ့ရေချိုးခြင်းက နှာခေါင်းကို သန့်ရှင်းစေပြီး အသက်ရှူရတာကို ကောင်းစေပါတယ်။
- ယူကလစ်လို ရနံ့ဆီကို ရှုပေးတဲ့အခါ အသက်ရှူရ ပိုကောင်းလာပြီး ပိုပြီးအိပ်ပျော်ပါတယ်။
- နှာခေါင်းသန့်ရှင်းရေး လုပ်တဲ့ Vick's Vaporub လို ဆေးမျိုးကလည်း နှာခေါင်းထဲမှာ ပိတ်နေတဲ့အရာတွေကို သန့်ရှင်းစေမှာပါ။
ပက်လက်လှန် အိပ်ခြင်းက ပါးစပ်ထဲက တံတွေးတွေကို အပြင် မထွက်ကျ လာစေတော့ ပါဘူး။ စောင်းအိပ်ခြင်း၊ မှောက်အိပ်ခြင်းက ပါးစပ်ထဲက တံတွေးတွေက စုမိလာပြီး ခေါင်းအုံးပေါ်ကျလာမှာပါ။
3. ညအိပ်တဲ့အခါ ဟောက်တတ်တဲ့ သူတွေ ကလည်း သွားရည်ကျတတ် ပါတယ်။
အသက်ရှူရတာ အဆင်မပြေတဲ့သူတွေက ဟောက်တတ်ကြ ပါတယ်။ ဟောက်ခြင်းက အိပ်ခြင်းကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေပြီး ညဘက်မှာ လန့်နိုးစေတတ် ပါတယ်။ မနက်နိုးတဲ့ အခါ ပင်ပန်းသလို၊ မူးသလိုလည်း ခံစားရတတ် ပါတယ်။ ဟောက်တတ်တဲ့ သူတွေကလည်း သွားရည်ကျကြ ပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ သူတွေ ကလည်း အသက်ရှူခြင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြဿနာ ရှိနိုင်ပါတယ်။
4. ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ပါ။
ကိုယ်အလေးချိန် များခြင်းကလည်း အိပ်စက်မှုမှာ သက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် များခြင်းကြောင့် အိပ်တဲ့အခါမှာ ဟောက်ပြီး သွားရည်ကျတတ်ကြ ပါတယ်။
5. အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ ပစ္စည်း ကိရိယာတွေကို သုံးပါ။
သွားရည်ကျခြင်းကို ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်နဲ့ အခါ ဆရာဝန်က ပစ္စည်းကိရိယာတွေကို လမ်းညွှန်ပေးပါတယ်။ အဲဒီလို ပစ္စည်း ကိရိယာလေးတွေက အိပ်ရေးဝဝ အိပ်နိုင်အောင်လည်း ကူညီပေးမှာပါ။
6. သောက်နေကျဆေးတွေကြောင့်လည်း သွားရည်ကျတတ်ပါတယ်။
တချို့ ပဋိဇီဝဆေးတွေက တံတွေးတွေက်ကို အလွန်အကျွံထွက်အောင် လုပ်ပေးပြီး သွားရည်ကျစေပါတယ်။
7. ခေါင်းကို တည့်တည့်ထားပြီး အိပ်ပါ။
ခေါင်းအုံးအမြင့်နဲ့ အိပ်တဲ့ အခါ သွားရည်ကျတာ နည်းသွားပါတယ်။
8. သွားရည်ကျတာ များတဲ့ အခါ ခွဲစိတ်မှု ခံယူရတတ် ပါတယ်။
တစ်ခါတလေမှာ ဆရာဝန်အချို့က ခွဲစိတ်ပြီး ဂလင်းတွေဖယ်ရှားပစ်ဖို့ အကြံပေး ပါလိမ့်မယ်။ အာရုံကြောနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြဿနာတွေ ရှိတဲ့အခါ တံတွေးအလွန် ထွက်ပါတယ်။ အလွန်အကျွံဖြစ်လာတဲ့အခါ ခွဲစိတ်ရတတ် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သွားရည်ကျတာကို မခွဲစိတ်ဘဲနဲ့ ပျောက်ကင်းအောင် လုပ်လို့ရမယ့် နည်းလမ်းကို ဆရာဝန်တွေက; အရင်ဆုံး အကြံပြုတတ်ကြ ပါတယ်။